ဘယ်လောက်အရည်အသွေးမြင့်ဖက်ထုပ်ကုန်ကျသင့်သလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဘယ်လောက်ကုန်ကျသင့်သလဲ pelmeni အရည်အသွေးမြင့်?
ကြက်သွန် - 200 ဂရမ်။
မုန့် - 550 ဂရမ်
အမဲသားအသား - 350 ဂရမ်
ဝက်သားအသား - 350 ဂရမ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 1 ဇွန်း
Berm အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်။ ဝက်သား 250, 300 အမဲသား, ကြက်ဥ, တစ်ဒါဇင် 40 အဘို့, 35, မုန့်ညက် 70 အပေါ်ကြက်သွန်နီကဆိုသည်။
88 + 105 +4+7+ 35 = 239 ။ နံ့သာမျိုးအပေါ် Naquin ducat ။ အကြောင်းကို 250 ပွတ်ထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းကီလိုဖက်ထုပ် 1 ။
, အထုပ်ထုတ်လုပ်အပ်စတိုးဆိုင်နှင့်ရောင်းဖို့သူတို့ရဲ့ esch ။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ဆ။ စုစုပေါင်းကောင်းပါတယ် pelmeni - တစ်ကီလိုလျှင်ရူဘီ ၅၀၀
ကြီးမားသော obmah ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အနည်းငယ်နိမ့်အမှန်တကယ်ဝယ်ယူစျေးနှုန်းများ။ ကီလိုအကြောင်းကို 140 ရူဘယ်၏အစစ်အမှန်ကုန်ကျစရိတ်။ ရောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ။
စျေးအရည်အသွေးနှင့်ထုပ်၏ထုတ်လုပ်သူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ purchasing တဲ့အခါမှာ ravioli သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းမှု (ဝက်သားအသားများနှင့် (သို့မဟုတ်) အမဲသား, ကြက်သွန်, ဆား, ငရုတ်ကောင်း) ၏ဖြစ်သင့်ဖတ်ပါ။ တစ်အိတ် 0,5 ကီလိုဂရမ်အဘို့ကောင်းသောဖက်ထုပ်များအတွက်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း။ (180-220r) ။ မူလစာမျက်နှာနေဆဲပိုကောင်းနှင့် tastier ဖြစ်ပါတယ်။
စတိုးဆိုင်ရှိဖက်ထုပ်များကိုကျွန်ုပ်မရှာပါ။ ကဲသာဘုရင်၌အမျှင်များပါရှိသည်၊ ဘာကြောင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။ ပဲပုပ်အစားထိုး? ငါစျေးကွက်ထဲမှာဖက်ထုပ်တစ်ကြိမ်မှာယူ။ , သူတို့ကတစ်နေရာတည်း, သီးခြားအလုပ်ရုံထဲမှာ, အမဲသားသုံးမျိုးကနေ - ပုံနှိပ်နေကြသည် - တစ်ကီလိုဝက် !!! 187 RUR အသားအမျိုးအစားနှစ်မျိုး ၁၄၀ ပွတ်ပါ။ ကြမ်းပြင်အတွက်။ ကီလိုဂရမ်။ (သူတို့ရှိသည် khinkaliကွမ်းခြံကုန်း manti, ဖက်ထုပ်) ။ သင်အလုပ်ရုံသို့ချဉ်းကပ်ပါကအဒေါ်သည်ထိုမုန့်ညက်များကိုမည်သို့ပုံဖော်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်ရော၊ အမှတ်တံဆိပ်ရောပါထမင်းစားခန်းကနေမလည်ပတ်ဘူး။ (ဗဟိုစျေးကွက် Voronezh ၏နေထိုင်သူများအဘို့, tervolator ၏ညာဘက်, သူတို့ကကုန်ပစ္စည်းများနှင့် Semi- ချောထုတ်ကုန်များဖုတ်ကြပါပြီ) ဤငါစားသောအရသာဆုံးဝယ်ယူဖက်ထုပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အစစ်အမှန်အိမ်လုပ်နှင့်ခွဲခြားနီးပါးနီးပါးဖြစ်ကြ၏နှင့် minced အသားခမ်းနားသည်, အရိုးနုများသို့မဟုတ်သံသယဖြစ်ဖွယ်အနံ့မရှိ, သူတို့က, ငရုတ်ကောင်းမှာအရသာမရှိ။ ထိုဟင်းရည်ပွင့်လင်းသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကကျနော့်အမြင်မှာကြီးမားတယ်။ ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းကအရည်အသွေးမြင့်တယ်။ ကျွန်တော့်အကြံပေးချက်ကတော့စားဖိုမှူးကောင်းတစ် ဦး နဲ့စားသောက်ခန်းကောင်းကောင်းတစ်ခုရှာဖို့ပါ။ (စကားမစပ်, သူတို့သည်မကြာခဏထုတ်လုပ်သည့်ရေကန်များ၌အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းကစီးပွားရေးခရီးစဉ်တွင်အလွန်စားသောက်ခဲ့သည်။ ညနေပိုင်းတွင်ထမင်းချက်များသည်ရူဘီ ၃၀၀ စီအတွက် ၁ ကီလိုဂရမ် pelmeni ကိုရောင်းခဲ့သည်။ )
ငါ၏မြို့ကိုခုနှစ်တွင် 900gr ဗူး pelemeney ကဲသာဘုရငျ 470r ဆိုလိုတာပါ။ သင်တန်းတစ်ခုခု Dorogova, ဒါပေမဲ့သူတို့တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများကိုမယူကြဘူး။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအရသာဖက်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါကသူတို့ကို၏အရည်အသွေးပေးထားသောစျေးနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီကြောင်းထင်ပါတယ်။
သင်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အဘို့, မိမိအိမ်နီးချင်းကို, သင်ကတရားမျှတပြီးလျောက်ပတ်ကိုစဉ်းစားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာအဘို့အမေးပါ။
စတိုးဆိုင်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသားများမှပြုလုပ်သောဖက်ထုပ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသားမှ လွဲ၍ ကြက်သွန်နီ နှင့်အမွှေးအကြိုင် - ကသူတို့တရာရာခိုင်နှုန်းကိုသဘာဝအကြောင်းကိုအထုပ်အပေါ်ဘယ်လောက်စကားများပါစေ, သူတို့ရှိသည်စျေးနှုန်းဘယ်လောက်ပဲကိစ္စ, ဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒီဗီဒီယို Watch နှင့် stuffing ပါဝင်သောအရာအားလုံးထက်မဝယ်ကြဘူး။ dobraquot ၏စိုက်ပျိုး, ဒါကြောင့် Quote မဟုတ်ကြောင်းအသားများတွင်ပါကမိမိတို့ကိုယ်ကိုလိမ်; လုံလောကျ, အဘယ်ကြောင့် esch ရော?
စူပါမားကတ်တွင်ဈေးအမြင့်ဆုံး dumplings များသည်ငယ်ရွယ်သော gobies အသားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ဘူးလျှင် 400 ရူဘယ်ကုန်ကျပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ ကောင်းပြီ, ထို့နောက်တံဆိပ်များကိုသာဖတ်ပါ, ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်ရေးတံဆိပ်များအထူးသဖြင့်မယုံကြည်သောသူတို့အဘို့ဝယ်ယူရန်ကူညီရန်။
ဥပမာအားဖြင့်, ငါ2ဖက်ထုပ်အမှတ်တံဆိပ် Quote pack မှာစူပါမားကက်စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူ; Pelmenquot; တဦးတည်း၏စျေးနှုန်း။ နှစ်ခု pachki.Na ရှေ့ဘက်များအတွက်နှစ်ရာရူဘယ်4ဖက်ထုပ်အသား, မဟုတ်ဝက်သားဆံ့ကပြောပါတယ်။ ရှယ်ယာနှုန်း Pozar ငါယုံကြည်ချက်တစ်ခု twinge မပါဘဲသူတို့ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကျွန်မဂရုတစိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မြင်းအသားဖက်ထုပ်၏ဖွဲ့စည်းမှုလာ!
ကိုယ့်မဆိုပစ္စည်းပစ္စယမစားခဲ့ဘူး, မြင်းစီးခြင်းမှလာ ...
ကီလိုအသားတစ်ဦးလျှင် .From 1
အသား 1 ကီလိုဂရမ် - 250 ပွတ်တိုက်နှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ကား (ပျော့ဖတ်တစ်ခုလျှင်)
ကြက်သွန် 200 gr - 40 ပွတ် - 8 ပွတ်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ - 10 ပွတ်ပေးပါ
မုန့်စိမ်း 1,3 ကီလိုဂရမ် - 50 ပွတ် - 65 ပွတ်
စုစုပေါင်း: ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကီလိုဂရမ်ဖက်ထုပ် RUB = 2,5 333 rubkg ကုန်ကျမည် 133
ငှားရန်နှင့် utility ကိုကုန်ကျစရိတ် (သို့မဟုတ်ရိုးရိုး utilities)
စုစုပေါင်း: 600 kgchas ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ် 1 300 အကြောင်းကိုရူဘယ်ကီလိုဂရမ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ကံမကောင်းစွာပဲ, ယနေ့စတိုးဆိုင်များတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားဖက်ထုပ်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်သူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သည်။ ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အရည်အသွေးမြင့်သည်။ သင်ကြိုးစားလျှင်၊ အိမ်တွင်အပြည့်အဝအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည့်သာမာန် dumpling ကိုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအရည်အသွေးမြင့်မားသောဖက်ထုပ်များသည်မည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်သည်ကိုသင်လုံးဝမသိရှိပါ။
ကျနော်တို့နံပါတ်များကိုအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, စူပါမားကက်တွင်ဤဖက်ထုပ်များမှာ 400-ပေါင်းရူဘယ်။ သို့သျောလညျး, ငါထင်ဘာတလွဲအဘို့ဤမျှလောက်ပိုက်ဆံပေးရကျိုးနပ်မဟုတ်ဘူး။ အနီရောင်စျေးနှုန်းဖက်ထုပ်ဒါ 150-200 ရူဘယ်။ သို့သော်အချို့လူများကသန့်ရှင်းတဲ့ဖက်ထုပ်ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်မှာတခြားတံဆိပ်ယုံအဲဒီဖက်ထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆက်လက်။ ဒါဟာအိမ်မှာလုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်
PS: အိမ်လုပ် ravioli ပြင်ဆင်နေ, သင်ကအနည်းဆုံးသူတို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။ ), စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အရသာရှိတဲ့နှင့်အာဟာရ
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်မမော်ဒယ်ဖက်ထုပ်ဝင်ငွေ။ အိမ်ရှင်ရောင်းချ pelmeni ကီလို 250 1 ရူဘယ်များအတွက် ထိုသို့သူ Quote သူတို့ကိုခေါ်ဆိုသကဲ့သို့, စျေးပေါကယုံကြည်သည်; မူလစာမျက်နှာ pelmeniquot; ။
သငျသညျအိမျမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ပြုမယ်လို့အတိအကျအဖြစ်ဖက်ထုပ်ထဲသို့မုန့်စိမ်း။ ဝက်သားနဲ့အမဲသား: အဆိုပါအသားနှစ်ခုပုံစံများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ငါ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးအဆင်သင့်-minced နံ့သာမျိုးနှင့်မုန့်စိမ်းနှင့်အတူ, ကိုယ့်ပနျးပုထု။
ရေတွက်, သင်တန်း, ထို့အပြင်မုန့်ညက်, ကြက်ဥ, မုန့်စိမ်းပေါ်မှာနံ့သာမျိုးကိုသုံးစွဲ 1 ကီလိုဂရမ်အဘို့အမဲသားကို၏ကုန်ကျစရိတ်တတ်၏။ ကျနော်တို့ကလမ်းလုပ်ဖို့ရှိသည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,680 စက္ကန့်ကျော် Generate ။